သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း	Posted on August 28, 2009	by mettayate သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း အကြောင်းရင်း – ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်သုံးရပ် မကွယ်ပျောက်စေရန်လည်းကောင်း၊ သာသနာတော်ကြီး အဓွန့်ရှည်စွာ သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားနေစေရန်လည်းကောင်း။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ထေရ၀ါဒသည် ဟီနယာန မဟုတ်